नयाँ अवतारमा प्रितीको इन्ट्री ! गीतमा बिकृति भन्ने हुदैन ! राष्ट्रले कलाकारलाइ चिनेन - Enepalese.com
इनेप्लिज २०७७ साउन १७ गते ०:४५ मा प्रकाशित
तीज गीत आए संगै धेरै कलाकारहरु ब्यस्त भएका छन् । यो समयमा मोर्डन होस् या पुराना गीत संगीत होस् सबै गीतहरुले चर्चा पहिरहेका छन् । कोरोनको डर त्रास हुदा पनि गीत संगीतले स्थान भने पाही रहेको छ ।
यहि कोरोनको समयमा प्रिती आले पोखरा आएको खबर प्राप्त भयो ।कोरोनाको समयमा पनि आलेको दर्जनौ गीतमा स्वर पाइन्छ । काठमान्डौ मा बस्दै आएपनि पोखरा लाइ उनि आफ्नो गाउ ठान्छिन। मिलेर बस्ने ओल्लो पल्लो घरकाले सहयोग गर्ने रहेको छ तर काठमान्डौमा ब्यस्त भएका कारण वल्लो कोठाको मान्छे मरेर कुहिए पनि वास्ता नहुने प्रीतिको भनाइ छ।